जर्मनीबाट कृष्ण वलिको १ करोड १५ लाखको हात ! - VOICE OF NEPAL
जर्मनीबाट कृष्ण वलिको १ करोड १५ लाखको हात !
७ बैशाख २०७६, शनिबार ०५:१९ 124 ??? ???????
शिशिर भण्डारीले पहिलो पटक युटुबबाट देखाए, रुकुमका कृष्ण वलिको पिडा । करेन्ट लागेर दुइृ हात र एक खुट्टा गुमाएका कृष्ण वलि र उनकी श्रीमती रुपा पुलामी मगर वलिको भिडियो सामाजिक सन्जालमा भाईरल बन्यो । कृष्णलाई हात हाल्न लाग्ने रकम देश तथा बिदेशबाट सहयोगीहरुले एक एक गरेर जुटाईदिए ।
तर पछिल्ले समय उनी,हरुको भिडियो आएको छैन । आखिर के गर्दैछन्, कृष्ण र रुपा ? किन मिडियामा आएका छैनन् ? हात हाल्ने काम के भैरहेको छ ? सबैको जिज्ञासाको बिषय यहि हो । पछिल्लो समय भारतमा गएर कृत्रिम हातको बिषयमा सबै जानकारी लिएर आएका कृष्ण वलिले तपाईहरुकै चाहना अनुसार बिश्वकै नँ १ बायोनिक हात हाल्दैछन् । उक्त दाहिने हातलाई मात्र १ करोड १५ लाख हाराहारी खर्च पर्ने कृष्णले हामीलाई बताए । त्यस अगाडि कृष्णको कम्मरको अप्रेशन छ । आफुलाई करेन्ट लागेकै दिन जेठ २४ सम्म हात हालिसक्ने कृष्णले लक्ष्य लिएका छन् ।